ဂျူးဒဏ္ဍာရီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျူးဒဏ္ဍာရီ (အင်္ဂလိပ်: Jewish mythology) သည် ရိုးရာပုံပြင်ဇာတ်လမ်းများနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကျမ်းစာများတွင် တွေ့ရှိရသည့် ရှေးရိုးစဉ်လာပုံပြင်များ၏ အဓိကစာပေဆိုင်ရာ အခြင်းအရာများဖြစ်သည်။ ထိုရင်းမြစ်စာပေများသည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ဂျူးဘာသာအကြောင်းကို သရုပ်သကန်ဖော်ပြ၊ ရှင်းပြနိုင်စေရန် အထောက်အကူပြုကြသည်။ ဂျူးဒဏ္ဍာရီလာ အကြောင်းအရာများသည် ခရစ်ယာန်ဒဏ္ဍာရီနှင့် အစ္စလာမ်ဒဏ္ဍာရီတို့အပေါ်တွင်လည်းကောင်း ယေဘုယျသဘောအားဖြင့် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်တွင်လည်းကောင်း ကြီးမားသည့်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ခရစ်ယာန်ဒဏ္ဍာရီသည် ဂျူလူမျိုးများဆီမှ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို တိုက်ရိုက်အမွေဆက်ခံကြကာ သမ္မာကျမ်းစာဟောင်းမှ တူညီသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို မျှဝေသုံးစွဲကြသည်။ အစ္စလာမ်ဒဏ္ဍာရီသည်လည်း ထိုတူညီသည့် များစွာသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို ယူငင်မျှဝေသုံးစွဲကြရာ ဥပမာအားဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းသည် ကာလခြောက်ခုအပေါ်တွင် ခြားနားတင်ပြထားခြင်း၊ အေဘရာဟမ်း၏ ရာဇဝင်၊ မိုးဇစ် (သို့) မိုးဇက် (Moses) နှင့် အစ်ဇ်ရာလိုက် (Israelites) လူမျိုးများအကြောင်း ဇာတ်လမ်းများ၊ အခြားအကြောင်းအရာများစွာတို့ ဖြစ်ကြသည်။
၁ ဟီဘရူးကျမ်းစာ (Tanakh)
၂ အဓိကအကြောင်းအရာနှင့် ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ
၂.၂.၁ အာဒမ် နှင့် ဧဝ
၂.၂.၃ စောဒမ် နှင့် ဂမောရာ
၂.၃ ရေကြီးရေလျှံမှု ဇာတ်လမ်း
၂.၄ အမျိုးသားရေးနှင့်ဆိုင်သော ဒဏ္ဍာရီ
၂.၄.၂ အက်စဒပ်စ်ကျမ်း (The Exodus)
၂.၅ သူရဲကောင်း ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ
၂.၅.၃ ဒေးဗစ်နှင့် ဂလိုင်းယ
၂.၆ ဗိသုကာဆိုင်ရာ ဒဏ္ဍာရီ
၂.၆.၁ ဘေးဘယ်လ် မျှော်စင်
၂.၇ နိုးကြား စောင့်ကြည့်သူများ
၃ ဇိုရိုရက်စထရာဘာသာ လွှမ်းမိုးမှု
ဂျူးဒဏ္ဍာရီတွင် အခြားသော အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ ယဉ်ကျေးမှုများ၏ ဒဏ္ဍာရီများနှင့် တူညီမှုများပါဝင်သည်။ ရှေးခေတ်ဟီဘရူးလူမျိုးများသည် 'ယားဝေး'နှင့်အတူ အခြားသော နတ်ဘုရားများကို ကိုးကွယ်ကြလျှက် အိမ်နီးချင်းနယ်မြေများရှိ ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုသို့သော အယူဝါဒများကိုလည်း ကျင့်သုံးကြ၏။ ဤရိုးရာဘာသာရေးများသည် သဘာဝတရားကိုးကွယ်မှုပုံစံများဖြစ်ကြ၍ နတ်ဘုရားများမှာ မုန်တိုင်းနှင့် မျိုးသန္ဓေအောင်ခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဖြစ်စဉ်များကို ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဌာန် တင်စားကိုးကွယ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော သဘာဝတရားများကို ကိုးကွယ်မှုများကြောင့် ကမ္ဘာ့အရှေ့ဖျား မကျတကျနိုင်ငံဒေသများရှိ ရိုးရာဘာသာတရားများသည် အလွန်စွမ်းအားရှိသောနတ်ဘုရားများနှင့် သောက်စားပျော်ပါးမူးရစ်သော နတ်ဘုရားများကို ဖော်ပြထားကာ ကြွယ်ဝ၍ ဇာတ်လမ်းဆန်သော ဒဏ္ဍာရီများရှိကြသည်ဟု ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ဖော်ပြကြသည်ဟူ၍ မာစီးယာ အက်လီယေးဒ်က ငြင်းခုံဆွေးနွေးထားသည်။
အိုင်ဇိုင်းယ (Isaiah)၊ အစ်ဇီးကစ်ယလ် (Ezekiel)၊ ဂျက်ရစ်မိုင်းယ (Jeremiah) တို့အပါအဝင် သမ္မာကျမ်းလာ တမန်တော်များနှင့်ပတ်သက်သော အရေးအသာများသည် အနီးနားဒေသများမှ ဒဏ္ဍာရီများနှင့် ကွာဝေးသော မြင့်မြတ်သောဘာသာရေးဟန် အယူအဆတစ်ခုကို ဖော်ပြထားသည်။ အစ္စရေး (ဣသရေလ)တို့၏ ဖန်တီးရှင်ဘုရားကို ဆိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခု၏ အမျိုးသားရေးဆန်သော ဘုရားတစ်ပါးအဖြစ် ရှုမြင်ခြင်းအစား ထိုအရေးအသားများက 'ယားဝေး' (Yahweh) ကို စကြဝဠာတစ်ခုလုံး၏ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားအဖြစ် ဖော်ပြထားကြသည်(ယားဗေး ဟုလည်းခေါ်ဝေါ်သည်)။
တမန်တော်များနှင့်ပတ်သက်သော ထိုအရေးအသာများသည် ဟီဘရူးတို့၏ သဘာဝတရားအားကိုးကွယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို ရှုံချထား၍ မြင့်မြတ်ခြင်းသဘောကို သဘာဝစွမ်းအားများနှင့် တန်းတူသဘောထားခြင်း လုံးဝမရှိပေ။ ဤသို့ပြုရာတွင် ၎င်းတို့သည် ဒဏ္ဍာရီအသစ်တစ်ခုပေါ်ထွန်းလာစေရန် အခွင့်ရေးပေးကြလေသည်။ ဒဏ္ဍာရီအသစ်ဆိုရာ၌ ဩကာသလောက၏အလွန်တွင် တည်ရှိနေသော တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားအကြောင်းကို ဖော်ပြသည့် ဒဏ္ဍာရီဖြစ်သည်။ သဘာဝပေါက်ပင်များနှင့်အတူ သေဆုံးပြီး ပြန်လည်ထမြောက်လာခဲ့သော (မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသက) 'တဲမွတ်ဇ်' နတ်ဘုရားနှင့်မတူဘဲ ဟီဘရူးတမန်တော်တို့၏ ဘုရားသည် သဘာဝတရားအလွန်၌ ရှင်သန်တည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝတရား၏စည်းချက်များက မကန့်သတ်နိုင်ဟု 'အားမ်စထရောန်' (Armstrong) က "ဘာဘီလုံနတ်ဘုရားများသည် ကစဉ့်ကလျှားအဖျက်အမှောက်အားများကို ဖြိုခွင်းစစ်ဆင်ရာတွင် ပါဝင်နေကြစဉ်နှင့် ၎င်းတို့၏စွမ်းအင်များကို ထိန်းသိမ်းရန် အလို့ငှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ လိုအပ်စဉ်တွင် 'ယာဝေး'သည် အလုပ်ပြီးမြောက်သောကြောင့် ခုနှစ်ရက်မြောက်တွင် အနားယူတော်မူ၏" ဟု မှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့သည်။
တမန်တော်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှတစ်ဆင့် ဂျူးတို့၏ ဒဏ္ဍာရီတွင် ၎င်းတို့၏ဘုရားကို သဘာဝတရားနှင့်ကွာဝေးသည်၊ သဘာဝတရားစွမ်းအားများကို မှီခိုခြင်းမရှိဘဲ ပြုမူဆောင်ရွက်သည်ဟု ဖော်ပြကြသည်။ တစ်ဖက်တွင် ဤအချက်သည် အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုအနေဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ သူ့အချိန် သူရာသီတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော သံသရာစက်ဝန်းလည်ပတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထာဝရ ပြုမည့်အစား 'ယားဝေး'သည် သဘာဝတရားအပြင်တွင် ရပ်တည် (တည်ရှိ) ခဲ့၍ ထိုသဘာဝတရားလည်ပတ်မှုတွင် ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်(နှောက်ယှက်)သည်။ မဖြစ်ဖူးသေးသော သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ဤသို့ အလွန်တရာကြီးကျယ်သည့် ဘုရားရှင်သည် လူသားများအတွက် ဆက်စပ်ဖော်ပြရန် လုံးဝဥသုံ ခက်ခဲလွန်းကာ မြင့်မြတ်လှပေသည်။ ထို့ဖြစ်၍ ယားဝေးနှင့်ပတ်သက်သော ဒဏ္ဍာရီများသည် သဘောတစ်ခုအရ ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါး၏။ အကြောင်းမှာ ထိုဒဏ္ဍာရီများ၌ များစွာသော လူသားဂုဏ်အင်ရှိ နတ်ဘုရားများ၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များ မပါဝင်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောဖြင့် 'ယားဝေး'တွင် အခြားမူကွဲများစွာရှိသော ဒဏ္ဍာရီများမပါဝင်သကဲ့သို့ အခြားပြိုင်ဘက် ရိုးရာဘာသာတရားများမှ ကြွယ်ဝ၍ ဇာတ်လမ်းဆန်သော ဒဏ္ဍာရီများကိုလည်း မျှဝေသုံးစွဲထားခြင်းမရှိပေ။
ဟီဘရူးတမန်တော်များသည် သဘာဝတရားနတ်ဘုရားများ၏ ကျော်ကြား၍ လူအများကိုးကွယ်မှုအပေါ် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရပုံကို ဂျူးဒဏ္ဍာရီက ရောင်ပြန်ဟပ်ပြသနိုင်သည်။ ကရန် အားမ်စထရောန်က သမ္မာကျမ်း၏ ပထမစာအုပ် (Genesis 1)ပါ ဖန်တီးခြင်း ဒဏ္ဍာရီက ဘာဘီလုံဒဏ္ဍာရီတို့ကဲ့သို့သော ရှေးကျ၍ ရန်ဆောင်တတ်သည့်သဘောရှိသော စကြဝဠာဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီများကို ဟန်ချက်ညီညီ လှလှပပ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ချေဖျက်သည်ဟု ရှုမြင်သည်။
ဘာဘီလုံ၏ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဒဏ္ဍာရီ 'အက်နျူမာ အက်လစ်'က 'မားဒွတ်' နတ်ဘုရားသည် 'တစ်ယာမတ်' မိစ္ဆာနတ်နဂါးသခင်မကို အနိုင်ယူ၍ နတ်တို့သနင်းအရှင်သခင်ဖြစ်လာပုံကို ဖော်ပြထားကာ လောကဖန်တီးခြင်းသည် သူမ၏ သေဆုံးသွားသော အလောင်းမှ ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် 'အားမ်စထရောန်'က သမ္မာကျမ်းပထမစာအုပ် ဖော်ပြချက်တွင် (တမန်တော အိုင်ဇိုင်းယအကြောင်း ဖော်ပြသည်စာအုပ်တွင် ယားဝေးသည် ပင်လယ်မိစ္ဆာသတ္တဝါ 'လဗိုက်ယသန်' ကို အောင်မြင်၏ဟု ဖော်ပြထား) ယခုလိုရေးသားထား၏ သ " နေ၊ လ၊ ကြယ်၊ ကောင်းကင်၊ ကမ္ဘာ တို့သည် အရည်အသွေးသဘောအရ နတ်ဘုရားများမဟုတ်ပါ။ ယားဝေးကိုလည်း အန္တရာယ်မပေးနိုင်ပါ။ ယားဝေးကိုသာ ခယဝပ်တွားရ၍ ၎င်းတို့ကို လက်တွေ့ကျသော အဆုံးသတ်တစ်ခုအတွက်သာလျှင် ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ပင်လယ်မိစ္ဆာသတ္တဝါမှာ 'တစ်ယာမတ်' မဟုတ်ဘဲ ဘုရားရှင်၏ ဖန်တီးထားသော သတ္တဝါသာဖြစ်၍ ထိုသတ္တဝါသည် ဘုရား၏အမိန့်ကို လိုက်နာသည်။" ထိုစာရေးဆရာမက သမ္မာကျမ်းဘာသာရေး သီချင်းစာအုပ် 'စားမ်' (Psalm 82) တွင် ယားဝေးသည် နတ်ဘုရားများညီလာခံတွင် ရပ်တန့်ကာ ထိုရိုးရာနတ်များကို ရှုံ့ချတော်မူ၍ ၎င်းတို့သည် နတ်ဘုရားများဖြစ်သော်လည်း လူသားများကဲ့သို့ သေဆုံးရမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။
လူသားတို့ကျဆုံးခြင်းနှင့် အေဒင် (အီးဒင်) ဥယျာဉ် ဇာတ်လမ်း၊ ဘုရားရှင်၏ ဖန်တီးမှု သရုပ်ဖော်
သမ္မာကျမ်းပထမစာအုပ် (Book of Genesis) ၏ ပထမအခန်းနှစ်ခုတွင် ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းနှစ်မျိုးကို တွေ့နိုင်သည်။ ပထမဇာတ်လမ်း၌ ဟီဘရူးတို့၏ ဘုရားကိုခေါ်သော အမည် 'အက်လိုဟင်' (Elohim)သည် ကောင်းကင်နှင့် ကမ္ဘာမြေကို ခြောက်ရက်အတွင်းဖန်တီးခဲ့ကာ ခုနှစ်ရက်မြောက်၌ အနားယူ၍ ကောင်းချီးပေးကာ သန့်စင်တော်မူသည်။ ဒုတိယဇာတ်လမ်းပုံပြင်တွင် ဘုရားရှင်ကို အမည်နာမတပ်၍ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြကြသည်။ 'ယားဝေး' ဟူ၍ဖြစ်၏။ ယားဝေးသည် ပထမဆုံးယောက်ျား အဲဒမ် (အာဒမ်) ကို ဖုန်မှုန့်မှတစ်ဆင့် ဖန်တီးကာ အီးဒန်ဥယျာဉ် (Garden of Eden) (မြန်မာပြည်၌ အေဒင်ဥယျာဉ်ဟု ခေါ်ဝေါ်သည်) တွင် နေရာပေး၏။ ထိုဥယျာဉ်တွင် တိရစ္ဆာန်များကို အုပ်စိုးခွင့် ပေးထားသည်။ ပထမဆုံးအမျိုးသမီး 'အီးဗ်' (ဧဝ) ကိုလည်း အဲဒမ်ဆီမှ ဖန်တီးယူကာ အဖော်ဖြစ်စေသည်။ ဘုရားသည် ကမ္ဘာလောက၏ အခြင်းအရာများကို နှုတ်မိန့်နှင့် အမည်နာမအားဖြင့် ဖန်တီး၍ ၎င်း၏ဖန်တီးသည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဂျက်နစ်စစ် ၁:၁-၂:၃ ဖန်တီးခြင်းအစီအစဉ်မှာ:
ပထမနေ့ – အလင်းရောင်ဖန်တီးခြင်း (သွယ်ဝိုက်သောနည်းအားဖြင့် အချိန်ကာလဖန်တီးခြင်း ပါဝင်သည်)
ဒုတိယနေ့ ကောင်းကင်နှင့် အကာသ (ဂျက်နစ်စစ် ၁:၁၇တွင် ကြယ်များကို အကာသ၌ တည်စေသည်)
တတိယနေ့ တစ်ခုတည်းသော စက်ဝန်းသဏ္ဍာရှိသောကုန်းမြေကို ဝန်းရံသော သမုဒ္ဒရာအဝန်းအဝိုင်းကိုဖန်တီးခြင်း၊ ဘုရားသည် သစ်ပင်များကို ဖန်တီးမှုမပြုဘဲ ကမ္ဘာမြေကိုသာ ဖန်တီးရန် နှုတ်မိန့်ပေးသည်။
စတုတ္ထနေ့ နေ့နှင့်ညဖြစ်စေရန် အကာသ၌ အလင်းများကို ထုတ်လွှင့်စေသည်။ ဤ၌ နေနှင့်လကို ရည်ညွှန်း၏။
ဆဌမနေ့ ပထမဆုံးလူ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကို ဖန်တီးခြင်း
ဒုတိယပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွင် (ဂျက်နစ်စစ် ၂:၄-၂:၂၅) ထိုအစီအစဉ်မှာ ကွဲပြားသည်။ ဘုရားသည် အမျိုးသား၊ အီးဒင်ဥယျာဉ်၊ စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များ၊ သက်ရှိများ ထို့နောက်မှ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးကို ဖန်တီးသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
လဗိုက်ယသန်၏ ပျက်ဆီးခြင်း (၁၈၆၅ သရုပ်ဖော်ပုံ)၊ ဟီဘရူးကျမ်းစာတွင် ဤပင်လယ်မိစ္ဆာကို ခြောက်ကြိမ်အထိ ဖော်ပြထား၏။
ဟီဘရူးတို့၏ အိမ်နီးချင်းများစွာ၏ ဒဏ္ဍာရီများတွင် တိုက်ခိုက်ပွဲအကြောင်းအရာများရှိကြ၍ သမ္မာနတ်များသည် မိစ္ဆာနတ်ဆိုး (ကစဉ့်ကလျှားဖြစ်ခြင်းသဘောရေးရာ ) များကို အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်ခြင်းများပါဝင်ကာ ဒဏ္ဍာရီတည်ဆောက်ပုံပိုင်းဆိုင်ရာ ဥပမာတစ်ခုမှာ ဘာဘီလုံနတ်ဘုရားအချုပ် အက်နျူးမာ အက်လစ် အကြောင်းဖြစ်သည်။ လူသိပိုနည်းသော ဥပမာတစ်ခုမှာ 'လာဘူး' ဒဏ္ဍာရီအပိုင်းအစများဖြစ်၏။ သမိုင်းပညာရှင် 'ဘားနာ့ မဲ့ဂင်' အရဆိုလျှင် တိုက်ပွဲဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီ၏ နိမိတ်ပုံသည် ဂျူးဒဏ္ဍာရီကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်၏ ကစဉ့်ကလျှားဖြစ်ပျက်ခြင်း၏ အမှတ်သညာဖြစ်သော 'လဗိုင်းယသန်' အပေါ်အောင်မြင်မှုအကြောင်း ဒဏ္ဍာရီ၌ တိုက်ခိုက်ပွဲအကြောင်းဖော်ပြချက်ပါရှိသည်။ ထို့အပြင် 'မဲ့ဂင်' က ဟီဘရူးလူမျိုးများသည် တိုက်ခိုက်ပွဲဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီ တန်ဆာဆင်ဖွဲ့နွဲ့မှုကို ဘုရားရှင်နှင့် စေးတန် (စေတန်) ကြားရှိ ဆက်နွယ်မှု၌ အသုံးချခဲ့ကြလေသည်။ မူလအားဖြင့် ဘုရားရှင်၏ လက်ထောက်ဖြစ်၍ လူ့လောက လူသားများအား (အကဲဖြတ်၍) (အမှား)စွပ်စွဲသူအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသည်။ (satan အဓိပ္ပာယ်မှာ ဆန့်ကျင်ဖက်၊ ဆန့်ကျင်ဖက်ပြုသည်။ ဟီဘရူး : שָּׂטָן အရ ပြိုင်ဖက်၊ ယှဉ်ဖက် ဟုအနက်ရသည်) စေးတန်သည် မိစ္ဆာသဘောတရား၏ မြစ်ဖျားခံရာအဖြစ် သီးသန့် အမှီအခိုကင်းကာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် နယ်မြေနှင့်အတူ (မိစ္ဆာ)ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သွားသည်။ ဘုရား၏ လက်ထောက်မဟုတ်တော့ဘဲ စကြာဝဠာဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်ရုန်းကန်မှုတွင် ပြိုင်ဖက်ဖြစ်သွားသည်။
သမ္မာကျမ်းဒုတိယစာအုပ် (အက်စဒပ်စ် - the Exodus) ဇာတ်လမ်းတွင်လည်း တိုက်ခိုက်ပွဲဆိုင်ရာ ဒဏ္ဍာရီကို ပြသထားလေသည်။ ပင်လယ်နီတွင် အီဂျစ်စစ်တပ်ကြီးကို ရေတွင် ဘုရားရှင်က နစ်မြုပ်စေခြင်းကို မြင်ပြီးနောက် ဟီဘရူးတို့ဆိုသော သီချင်း 'ပင်လယ်၏တေးသီချင်း' (Song of the sea) တွင် တိုက်ခိုက်ပွဲဆိုင်ရာ အဆင်တန်ဆာဖွဲ့နွဲ့မှုနှင့် ဘာသာစကား(အရေးအသားပုံစံ) တို့ပါဝင်သည်ဟု မဲ့ဂင်က ယုံကြည်ထားသည်။ ထိုဖွဲ့နွဲ့သည့်ဘာသာစကားများကို အစ္စရေးတို့၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထင်ရှားမှုလက္ခဏာများကို အလေးအနက်ပြုမိစေရန် သုံးစွဲထားသည်။ ထင်ရှားသော ဘာသာရေး လက္ခဏာများ၌ ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ကူးခြင်း၊ ဖဲရိုးဘုရင်များ (ဖာရို)ထံမှ လွတ်မြောက်ခြင်း စသဖြင့်ပါဝင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ အားမ်စထရောန်က " 'ရိုးရာဘာသာတရားများတွင် လောကဖန်တီးစဉ် ပင်လယ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲခြင်း' နှင့် 'အီဂျစ်တို့ထံမှ လွတ်မြောက်အောင် ခရီးရှည်ထွက်ခြင်း' ကြားတူညီမှုများရှိသည်ကို မှတ်ချက်ပြုဖော်ပြသည်။ အက်စဒပ်စ် (Exodus) တွင် မိုးဇစ်က ကျူပင်များရှိသည့် ရေပြင်(ပင်လယ်ပြင်) (သို့) (ပင်လယ်နီ) ကို ခွဲသည့်အကြောင်းပါဝင်သည်။ သို့ရာတွင် ဤအက်စဒပ်စ်၌ပါရှိသော အကြောင်းအရာသည် စကြာဝဋ္ဌာသဘောမဟုတ်ဘဲ လူအုပ်စုမျိုးနွယ်တစ်ခု အကြောင်းသာဖြစ်သည်။" ဟု စာရေးဆရာမက မှတ်ချက်ပြုသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အစ္စရေးလူမျိုးများကိုယ်စား ဘုရားရှင်က တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူပေးသည့် မြင့်မြတ်သောစစ်သည်တော် (divine warrior) ဟု ၎င်းတို့၏ဘုရားကို ဖွဲ့နွဲ့တင်စားချက်သည် 'ပင်လယ်၏တေးသီချင်း' (Ex.15) တွင် ထင်ထင်ရှားရှား သက်သေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟီဘရူးကျမ်းစာများပါ ကဗျာလင်္ကာတို့တွင် ဤသို့အဖွဲ့အနွဲ့တန်ဆာဆင်မှုများစွာ ပါဝင်လေ၏ (အိုင် ဆမ်မြူရယ်လ် ၂; ဇက်ခါရိုင်းယာ ၉:၁၁–၁၆;၁၄:၃-၈)။
အချို့သော နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ ဒဏ္ဍာရီပညာရှင်များက ဂျူးဒဏ္ဍာရီသည် ရိုးရာဘာသာတရားများရှိ ဒဏ္ဍာရီများကို ယူငင်ထားသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထိုပညာရှင်များအရ ဂျူးတို့သည် ထိုရိုးရာဘာသာတရားများကို တစ်ဖက်က တွန်းလှန်ခုခံကြကာ တစ်ဖက်တွင်လည်း ထိုဘာသာတရားများ၏ ဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာ အခြင်းအရာများကို ယူငင်သုံးစွဲကြသည်။
အာဒမ် နှင့် ဧဝ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂျက်နစ်စစ်တွင်ပါရှိသော ဖန်တီးခြင်းဒဏ္ဍာရီအရ အဲဒမ် (သို့) အာဒမ် နှင့် အိဗ် (သို့) ဧဝတို့သည် ပထမဆုံး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤကျမ်းစာ၏ အခန်းတစ်မှ အခန်းငါးအထိတွင် ထင်ရှားသောအမြင်ရှုထောင့်မှ ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းနှစ်ခုကို ရေးသားထားသည်။ ပထမဇာတ်လမ်း၌ အာဒမ်၊ ဧဝတို့ကို ဘုရားရှင်၏ ရုပ်အသွင်ပုံဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ကာ မျိုးပွားရန်အလို့ငှာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပူးတွဲ၍ ပေးအပ်ထားသည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်ဖန်တီးခဲ့ပြီးသော အရာရာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်လည်း အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားသည်။ ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွင် ဘုရားရှင်သည် မြေမှုန်မှ အာဒမ်ကို ဖန်တီး၍ အီးဒင် (အေဒင်) ဥယျာဉ်တွင် ထားရှိတော်မူကာ ၎င်းကို သစ်ပင်၊ တိရစ္ဆာန်များအပေါ် အုပ်စိုးခွင့် ပေးသနားထား၏။ အပင်တစ်ပင်မှ ထွက်ရှိလာသောအသီးကိုမူ စားသုံးခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည်။ အာဒမ်အတွက် အဖော်အသင်းရစေရန် အာဒမ်၏ နံရိုးဖြင့် ဧဝကို ဆက်လက်ဖန်တီးသည်။
အဲဒမ် နှင့် အီဗ် ကို ဥယျာဉ်တော်မှ နှင်ထုတ်ခြင်း
သမ္မာကျမ်းလာ အေဒင်ဥယျာဉ်ဇာတ်လမ်း၊ အထူးထင်ရှားဆုံးမှာ ဂျက်နစ်စစ် အခန်း ၂၊ ၃ နှင့် အစ်ဇီးခီယယ်လ် (ဗြိတိသျှ) (အဇက်ခီယယ်လ် (ယူအက်စ်)) စာအုပ်တို့တွင်ဖြစ်ကာ ထိုဇာတ်လမ်းတွင် အာဒမ်နှင့် ဧဝကို အဝတ်မပါ ကိုယ်ဗလာပုံစံဖြင့် အေဒင်ဥယျာဉ်တွင် လမ်းလျှောက်ကြသော အပြစ်ကင်းစင်သည့် သူများအဖြစ် သရုပ်ဖော်ကြသည်။ အမျိုးသားသည် ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ မည်သည့်အပင်မှအသီးကိုမဆိုလွတ်လပ်စွာ စားသုံးခွင့်ရှိသော်လည်း 'ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှု အသိပညာအပင်'မှ အသီးကို စားသုံးရန် ပိတ်ပင်ထားသည်။ နောက်ဆုံး၌ ဘုရားရှင်သည် အမျိုးသားအတွက် အဖော်အဖြစ် ၎င်း၏နံရိုးမှ အိဗ် ခေါ် ဧဝကို ဖန်တီးပြုလုပ်သည်။ သို့ရာတွင် မြွေက ဧဝကို တားမြစ်ပင်မှ အသီးစားရန် လှည့်ဖျား၏။ ဧဝစားပြီးနောက် အာဒမ်သည် ပညတ်ကို ချိုးဖောက်ကာ စားသုံး၏။ ဘုရားရှင်က မြွေနှင့် မြေပြင်ကို ကျိန်စာသင့်စေသည်။ ထိုအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကိုလည်း ဘုရားရှင်ကို အာခံခြင်း၏ အပြစ်ဒဏ်အကျိုးဆက်ကို ဟောပြောသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသားကို ဥယျာဉ်တော်အတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းကို တားမြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုအတွင်းရှိ 'ထာဝရအသက် သစ်ပင်'မှ အသီးကို မစားစေလို၍ဖြစ်ကာ ထိုအသီးကိုစားပါက ထာဝရအသက်ရှင်သန်မည်ဖြစ်၏။ ဥယျာဉ်အရှေ့အရပ်တွင် အတောင်ပါသော ကလေးငယ် ကောင်းကင်တမန်နှင့် မီးလျှံဓားကို ထားရှိသည်။ "ထိုဓားသည် ထာဝရအပင်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို တားဆီးလိမ့်မည်။" (ဂျက်နစ်စစ် -၃:၂၄)
ဤဥယျာဉ်ဇာတ်လမ်းပုံပြင်သည် ဒဏ္ဍာရီဆန်သော အကြောင်းအရာကို ဘာသာရေးယုံကြည်မှုအတွက် အသုံးချထား၍ လူသားတို့သည် မူလအစ အပြစ်ကင်းစင်ခြင်း၊ မွန်မြတ်ခြင်း အနေအထားမှ မျက်မှောက် လူသားတို့၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှုသိခြင်းတရားအပြစ်၊ ဒုက္ခ၊ မရဏတရား အနေအထားကို ရှင်းလင်းပြသရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဂျိုးဇက် ကမ်ဘဲလ်က ထိုဥယျာဉ်မှ တားမြစ်ထားသောအသီးသည် ရိုးရာပုံပြင်လေ့လာသူ ကျောင်းသူ/သားများအဖို့ 'တစ်ခုတည်းသော တားမြစ်သည့်အရာ'အဖြစ် ရိုးရာနတ်သား/သမီးပုံပြင်များတွင် အလွန်ရေပန်းစားသော ဥပမာတန်ဆာဆင်ဖွဲ့နွဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုသည်။ တစ်ခုတည်းသော တားမြစ်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားဥပမာတစ်ခုကို ဆားဗီးယား ရိုးရာပုံပြင် ဘက်ရှ် ချက်လစ်ခ်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထိုပုံပြင်တွင် သူရဲကောင်းအား တစ်ခါးပေါက်တစ်ခုကို မဖွင့်ရန်ပိတ်ပင်ထားလေသည်။ သို့သော် အဆိုပါသူက တံခါးအားဖွင့်လေရာ လူဆိုးတစ်ဦးလွတ်မြောက်သွား၏ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းသဘောတရားကို ရှေးခေတ်ဂရိဒဏ္ဍာရီမှ ကြမ္မာဆိုး သေတ္တာ (သို့) မကောင်းမှုသေတ္တာ (Pandora's box) ဇာတ်လမ်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။
စောဒမ် နှင့် ဂမောရာ[ပြင်ဆင်ရန်]
စောဒမ် နှင့် ဂမောရာမြို့များ ပျက်စီးခြင်း
စောဒမ် (Sodom) နှင့် ဂမောရာမြို့ (Gomorrah) များအပေါ် စီရင်မှုဇာတ်လမ်းကို ဂျက်နစ်စစ် ၈-၁၉ တွင်ဖော်ပြထား၏။ လူသုံးဦးသည် မမ်းရီးလွင်ပြင် (Mamri) တွင်ရှိနေသော အေဘရာဟမ်းထံသို့ လာလေ၏။ ကောင်းကင်တမန်များသည် အေဘရာဟမ်းနှင့် ဇနီးသည် ဆဲရာတို့ထံမှ ကြိုဆိုပျူငှာမှုရရှိပြီးနောက် ဘုရားရှင်သည် စောဒမ်မြို့နှင့် ဂမောရာမြို့များမှ အဖြစ်အပျက်များကို ကြားသိ၍ ထိုမြို့နှစ်မြို့၏ အပြစ်သည် အလွန်တရာဆိုးဝါးလှသည်ကို အေဘရာဟမ်းအား ဖော်ထုတ်ပြောဆိုသည်။ စောဒမ်မြို့သားများသည် ကောက်ကျစ်၍ ဘုရားရှင်ရှေ့တော်မှောက်တွင် အပြစ်ပြုသူများလည်းဖြစ်ကြ၏။ စောဒမ်ကို ဘယ်ရာဘုရင်မှ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်၍ ဂမောရာမြို့ကို ဘီအာရှာဘုရင်က မင်းပြုသည်။
အေဘရာဟမ်းက ဘုရားရှင်အား မြို့အတွင်း၌ သမ္မာအယူရှိသော လူငါးဆယ်ကို တွေ့ရှိပါက မြို့ကိုချမ်းသာပေးနိုင်ပါမည်လောဟု မေးလေရာ ဘုရားရှင်က ထိုနေရာတွင် ထိုသို့သောသူရှိပါက ဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟု ပြောကြားသည်။ အေဘရာဟမ်းက ဆက်လက်၍ ဘုရားရှင်၏ ဂရုဏာတော်ကို လူအရေအတွက် တဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့၍ တောင်းခံရာတွင် (ပထမ ၄၅၊ ၄၀၊ ... နောက်ဆုံး လူဆယ်ယောက်) ဘုရားရှင်က အကြိမ်တိုင်းတွင် သဘောတူသည်။ တမန်နှစ်ပါးကို စောဒမ်မြို့သို့လွှတ်တော်မူကာ စုံစမ်းစေ၏။ ထို့နောက် အေဘရာဟမ်း၏ တူတော်စပ်သူ လော့ (Lot) ကိုတွေ့ရှိပြီး လော့က တမန်နှစ်ပါးကို သူနှင့်ယာယီနေထိုင်ပေးရန်နှင့် အတူစားသောက်ရန် တောင်းဆိုသည်။ တမန်တော်များ အိပ်၍အနားမယူမီ မြို့သားများက လော့အား ဧည့်သည်များကို မည်သူမည်ဝါမှန်း သိစေရန်အတွက် ခေါ်ဆောင်လာရန် တောင်းဆိုကြသည်။ (ဂျက်နစ်စစ် ၁၉:၄-၅) လော့က ထိုသို့ပြုရန် ငြင်းဆန်းပြီး ယင်းအစား ၎င်း၏ အပျိုစင်သမီးနှစ်ဦးကို ပေး၏။ သို့သော် ထိုမြို့သားများက ကမ်းလမ်းမှုကို ငြင်းဆန်၍ ဤတစိမ်းတရံဖြစ်သော လော့အား မကျေမနပ်ပြေဆိုရင်း အမိန့်များပေးရင်းဖြင့် တံခါးကိုရိုက်ချိုးရန် အိမ်အနီးသို့ ချဉ်းကပ်လာကြလေသည်။ လော့၏ တမန်များက ၎င်းအားကယ်ဆယ်၍ ထိုသူတို့ကို အမြင်အာရုံပျောက်ဆုံးစေခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ တမန်များကို မြို့ကိုဖျက်ဆီးမည့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ကို ပြောကြားခဲ့၍ မြို့ထဲတွင် လူကောင်း ဆယ်ယောက်မျှပင်မရှိသောကြောင့် လော့အား မိသားစုကိုခေါ်ဆောင်ပြီး ထွက်ခွာရန် အမိန့်ပေးသည်။ ထိုသို့ လွတ်မြောက်စေရန် ပြေးနေစဉ် လော့အား နောက်သို့လှည့်မကြည်ရန်လည်း သတိပေး၏။ သို့သော်လည်း ဘုရားရှင်က စောဒမ်မြို့နှင့် ဂမောရာမြို့ကို မီးနှင့် ကန့်မှုန့်ဖြင့် ဖျက်ဆီးနေစဉ် လော့၏ဇနီးက မြို့ကို နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိလိုက်သောကြောင့် ဆားမှုန်များဖြစ်သွားသည်။
အေဘရာဟမ်းဘာသာတရားများတွင် စောဒမ်မြို့၊ ဂမောရာမြို့တို့သည် အပြစ်ပြုရန် အရှက်အကြောက်မရှိဆိုသည်နှင့် အနက်သဘောတူညီ၍ ၎င်းတို့၏ ကျဆုံးခြင်းသည်လည်း (ဘုရားရှင်/နတ်ဘုရား/သဘာဝလွန်စွမ်းအား)၏ ဒဏ်ခတ်ခံရခြင်းကို ထင်ရှားစေသော သရုပ်သကန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်တူသည်။
နိုအာ၏ လှေကြီး၊ အဒ်ဝပ်ဒ် ဟစ်ခ်စ် ၏ ဆီဆေးပန်းချီ၊ ၁၈၄၆ ဖစ်လာဒဲလ်ဖီးယား အနုပညာပြတိုက်
ဂျက်နစ်စစ်တွင်လာသော ရေကြီးမှုအကြောင်း ဇာတ်လမ်းသည် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ပြောဆိုကြသော ရှေးကျသည့် ရေကြီးမှု ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များနှင့် တူညီမှုများရှိသည်။ ဂစ်ဂါမက်ရှ် ကဗျာလင်္ကာရှည်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ကမ္ဘာ့ရေကြီးမှုနှင့်ပတ်သက်သော မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဒဏ္ဍာရီသည် ဤဇာတ်လမ်းနှင့် တူညီမှုအများဆုံးအနက်က တစ်ခုဖြစ်သည်။ (ဂျက်နစ်စစ် ၆:၅–၂၂) ဘုရားရှင်က လူသားတို့အပြစ်ကြောင့် ကမ္ဘာကို ရေကြီးစေ၍ အသစ်တဖန် ပြန်လည်စတင်စေရန် ဆုံးဖြတ်တော်မူသည်။ နိုအာ (Noah) ခေါ်သောသူသည် မှန်ကန်သောသူဖြစ်၍ လူတို့အကြားတွင် အပြစ်တင်မထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က နိုအာအား လှေကြီးတစ်စီး တည်ဆောက်ရန် ညွှန်ကြားတော်မူ၏။ ထိုလှေတွင် ၎င်းမိသားစုနှင့်အတူ တိရစ္ဆာန်တိုင်းမှ အနည်းဆုံး အကောင်နှစ်ကောင်ကို တင်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရေကြီးမှုကြီးဖြစ်၍ ကမ္ဘာကို ရေထုများ ဖုံးလွှမ်းသွားသည်။ ရက်ပေါင်းလေးဆယ်ကြာသော် နိုအာက ကျီးနက်တစ်ကောင်ကို လွှတ်၍ ရေထုအောက်သို့ ကျ မကျ စစ်ဆေးစေသည်။ ထို့နောက် ချိုးငှက်ကို လွှတ်ပြန်၍ ထိုသို့ စစ်ဆေးခြင်းကို ပြုစေသည်။ ထိုလှေကြီးမှ ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက် နိုအာက ဘုရားရှင်ကို ယစ်ပူဇော်မှုပြုသည်။ ဘုရားရှင်က ကျေနပ်ချိုမြိန်သော အနံ့အရသာကို ရရှိ၍ ကမ္ဘာလောကကို မည်သည့်အခါမျှ ရေဖြင့် မဖျက်ဆီးဟု ကတိထားတော်မူသည်။ ထို့ကတိတော်ကို သက်တန့်ဖြင့် ပုံဖော်၍ ပြသသည်။ ထိုနည်းတူစွာ မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဂစ်ဂါမက်ရှ် လင်္ကာတွင် လူသားတို့၏ အော်ဟစ်ဆူညံသံများက နတ်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသဖြင့် နတ်များက ရေကြီးမှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ နတ်ဘုရားတစ်ပါးက Utnapishtim ခေါ်တွင်သည့် အမျိုးသား စ်ဦးကို လှေတစ်စီးဆောက်ရန် သတိပေးကာ ထိုလှေတွင် မိသားစုနှင့် တိရစ္ဆာန်များကို ခေါ်ဆောင်ရန်လည်း ပြောကြားသည်။ ရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပြီးနောက် Utnapishtim က ချိုးငှက်၊ ပျံလွှား၊ ထို့နောက် ကျီးနက် တို့ကို လွှတ်ကာ ရေထု အောက်သို့ ကျဆင်း မဆင်း စစ်ဆေးစေသည်။ လှေမှထွက်လာပြီးသော် Utnapishtimသည်လည်း ယစ်ပူဇော်မှုကို နတ်ဘုရားများအား ပြုသည်။ ထိုနတ်ဘုရားများက ချိုမြိန်သော အနံ့ရရှိကြ၍ ရေထုလွှတ်မိခြင်းကို နောင်တရကြသည်။
အခြားသော ရှေးဟောင်း ရေလွှမ်းမိုးသည့် ဒဏ္ဍာရီကို ဟိန္ဒူဒဏ္ဍာရီ မှ မတ်ဆယ( Matsya) ငါး ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းပုံပြင်အရ ဗိဿနိုး (ဗစ်ရှ်နူး) သည် ငါးအသွင်ယူ၍ ရှေးဘိုးဘေးတစ်ဦး မာနု ကို ရေလွှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်မည့်အကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ ရှိရှိသမျှ တိရစ္ဆာန်များကို လှေအတွင်း၌ ခေါ်ဆောင်ရန်လည်း ပြောကြား၏။ သမ္မာကျမ်းနှင့် မက်ဆိုပိုတေးမီးယား လင်္ကာတို့နှင့် မတူဘဲ ဤရေကြီးမှုကြီးသည် ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သော သဘာဝလွန် စွမ်းအားတစ်ခုက ဖန်တီးခြင်းမဟုတ်ချေ။ ထိုအစား ဤရေကြီးမှုသည် ဟိန္ဒူဒဏ္ဍာရီ၌ သံသရာသဘော ဖြစ်ပျက်တတ်သည့် ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း စကြာဝဠာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
ဂျေးကာ့ဘ်သည် ကောင်းကင်တမန်တော် တစ်ဦးနှင့် လုံးထွေးသတ်ပုတ်နေခြင်း
ဟီဘရူးသမ္မာကျမ်းတွင် မျိုးနွယ်စတင်သူများမှာ အေဘရာဟမ်းနှင့် သားဖြစ်သူ အိုင်းဇက် (Isaac)၊ အိုင်းဇက်၏သား ဂျေးကာ့ဘ် (Jacob) တို့ဖြစ်ကာ ဂျေးကာ့ဘ်ကို 'အစ္စရေး' ဟုလည်းခေါ်ဝေါ်၍ 'အစ်ဇရာလိုက်'လူမျိုးများ၏ ရှေးဘိုးဘေးလည်းဖြစ်သည်။ ဤသုံးယောက်ကို စုပေါင်းဝေါဟာရအနေဖြင့် 'ဂျူးဘာသာ' (ရဟူဒီဘာသာ) ၏ 'ပေးထရိယာ့ခ်' (patriarch - မျိုးနွယ်စတင် ဦးဆောင်သူများ) ဟုရည်ညွှန်းကြသည်။ ၎င်းတို့နေထိုင်ခဲ့သော ခေတ်ကာလကို 'Patriarchal age' အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ဂျက်နစ်စစ်တွင်ပါဝင်သော ဇာတ်လမ်းများသည် ထိုသုံးဦးခေတ်နောက်ပိုင်းကာလများနှင့် နယ်မြေ စသည်တို့အကြောင်းကို ဗဟိုပြုရေးသားထား၏။ အေဘရာဟမ်းကို ဘုရားရှင်က ၎င်း၏ဖခင် 'တဲရ'နေအိမ်မှ ထွက်ခွာရန်နှင့် 'ကေးနန်' (Canaan) ဆိုသည့် ကတိထားတော်မူသော နယ်မြေတွင် အခြေချနေထိုင်ရန် ညွှန်ကြားသည်။ ထိုနယ်မြေကို ဘုရားရှင်က အေဘရာဟမ်းနှင့် ၎င်း၏ သားသမီးများကိုသာ ပေးသနားထား၏။ အေဘရာဟမ်းလွန်သော် ဆက်ခံမည့်သူများစွာကို တင်ပြကြရာတွင် တိုင်းသစ်ပြည်သစ် ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကတိစကားအရ ဆက်ခံမည့်သူမှာ 'အစ်ရှ်မေးယယ်လ်' (Ishmael) ဖြစ်သော်လည်း အေဘရာဟမ်းနှင့် ၎င်း၏ဇနီး 'ဆဲရာ' (ဖအေတူ သို့ မအေတူ မောင်နှမ)က မွေးသော သားတစ်ဦးဖြစ်သည့် 'အိုင်းဇက်' က ဘုရားရှင်၏ အေဘရာဟမ်းအပေါ်ထားရှိသော ကတိစကားကို အမွေခံသည်။ ဂျေးကာ့ဘ်သည် အိုင်းဇက်နှင့် 'ရဘက်ကာ' (Rebecca) တို့၏သားဖြစ်ကာ အစ်ဇရာလိုက်လူမျိုးများ၏ ရှေးဘိုးဘေးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ ဂျေးကာ့ဘ်မှ ဆင်းသက်လာသော သားဆယ့်နှစ်ဦးမှာ အစ္စရေးမျိုးနွယ်စုများ၏ ရှေးဘိုးဘေးများဖြစ်လာသည်။
အက်စဒပ်စ်ကျမ်း (The Exodus)[ပြင်ဆင်ရန်]
ပင်လယ်နီကို ဂျူးများ ဖြတ်သန်းခြင်း
လူအများအပြား အုပ်စုလိုက်ထွက်ခွာခြင်း ဇာတ်လမ်းပုံပြင်မှာ အက်စဒပ်စ်ကျမ်း (အသံထွက် - အက်ခ် စ ဒ(စ်)) (သမ္မာကျမ်းမြန်မာပြန်တွင် 'ထွက်မြောက်ရာကျမ်း' အဖြစ် ဖော်ပြသည်။)၊လစ်ဗစ်တစ်ခ(စ်)ကျမ်း (Leviticus)၊ နမ်ဘာဇ်ကျမ်း (Numbers)၊ ဒြူးတရောနမီကျမ်း (Deuteronomy) စာအုပ်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အစ်ဇရာလိုက်လူမျိုးများသည် အီဂျစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဂိုရှန်နယ်မြေတွင် ဂျေးကာ့ဘ်နှင့် ဂျိုးဇစ်ဖ် (ဂျိုးဇက်ဖ်)တို့လက်ထက်များတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဖဲရိုး (ဖာရို) ဘုရင်အသစ်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး အစ္စရေး၏ သားသမီးများကို ကျွန်ပြု၍ ဖိနှိပ်ခဲ့ကြသည်။ မိုးဇစ် (မိုးဇက်) မွေးသောကာလတွင် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သော ဖဲရိုးဘုရင်သည် ယောက်ျားသား ဟီဘရူးကလေးငယ်တိုင်းကို နိုင်းမြစ်တွင် နှစ်၍သတ်စေသည်။ သို့သော် မိုးဇက်ကို မိခင်က လှေတစ်စီးတွင် ထားခဲ့ပြီး ကျူရိုးများဖြင့် ဖုံးခဲ့သည်။ ထိုကလေးငယ်ကို ဖဲရိုးဘုရင်၏ သမီးတော်က ကယ်ဆယ်၍ မွေးမြူလေသည်။ တစ်နေ့ မိုးဇက်လူလားမြောက်သော် ဟီဘရူးတစ်ဦးအား ရိုက်နှက်နေသော အီဂျစ်တစ်ဦးကို သတ်ခဲ့၏။ ဖဲရိုးဘုရင်၏ သေဒဏ်မှ လွတ်ကင်းစေရန် မစ်ဒီယန်ဒေသသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။
ထို၌ ဟိုရက်တောင်ရှိကာ ထိုတောင်တွင် ဘုရားရှင်က မီးလောင်နေသော ခြုံပုတ်အသွင်ဖြင့် ကိုယ်ထင်ပြသည်။ အမည်နာမတော်ကိုလည်း စာလေးလုံးဖြင့် 'YHWH' ဟူ၍ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၎င်းကို အီဂျစ်သို့ ပြန်၍ အစ္စရေးများကို အချုပ်အနှောင်မှလွတ်ကင်းစေရင်း 'ကတိထားတော်မူသော နယ်မြေ' သို့ ခေါ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားတော်မူသည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း ဘုရားရှင်က မိုးဇက်ကို သတ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း ဇနီးသည် 'ဇစ်ပိုရ' (Zipporah) က မိုးဇက်အသက်ကို ကယ်ဆယ်ခဲ့သည်။ မိုးဇက်က ဘုရားရှင်၏ အမိန့်ကို ထမ်းဆောင်ရန် ပြန်လာခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားရှင်က ဖဲရိုးဘုရင်ကို ငြင်းဆန်အောင် ပြုသည်။ ဘုရားရှင်က အီဂျစ်ပြည်ကို ကပ်ဆိုးဆယ်ခုခံစားစေပြီးမှသာလျှင် ဖဲရိုးဘုရင်များက အလျှော့ပေးခဲ့၏။ မိုးဇက်က အစ်ဇရာလိုက်များကို အီဂျစ်နယ်စပ်ရောက်သည်အထိ ခေါ်ဆောင်သော်လည်း ဘုရားရှင်က ဖဲရိုးဘုရင်၏ စိတ်နှလုံးကို မာကျောစေရန် ထပ်မံပြုသည်။ အစ္စရေးများနှင့် ထိုနိုင်ငံများအပေါ်ထားရှိသော ၎င်း၏ စွမ်းအားကို ပြသရန်အနေဖြင့် ဖဲရိုးဘုရင်နှင့် ၎င်းစစ်တပ်ကြီးကို ပင်လယ်နီ၌ ဖြတ်ကူးစဉ် ချေမှုန်းနိုင်ရန် အလို့ငှာ ထိုသို့ ဘုရင့် စိတ်နှလုံးကို မာကျောစေရန် ပြုခြင်းဖြစ်၏။
အီဂျစ်မှ မိုးဇက်သည် အစ်ဇရာလိုက်လူမျိုးများကို သမ္မာကျမ်းလာ ဆိုင်းနိုင်းတောင်သို့ ဦးဆောင်လာခဲ့သည်။ ထိုတောင်တော်၌ ဘုရားရှင်က ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို ကျောက်ပြားပေါ်၌ ရေးထိုး၍ ပေးခဲ့သည်။ ထိုတောင်၌ နောက်ပိုင်းတွင် မိုးဇက်နှင့် လူကြီးသူမတို့သည် ကတိကဝတ်ခံကြရာ အစ္စရေးများသည် ဘုရားဥပဒေကို လိုက်နာ၍ ဘုရားရှင် 'YHWH' ၏လူများဖြစ်ရမည်၊ 'YHWH' သည်သာ ၎င်းတို့ကိုးကွယ်သော ဘုရားဖြစ်ရမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ မိုးဇက်က ဘုရားရှင်၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းကို ပြန်ကြားပြောဆိုကာ (ဂျူး)ရဟန်း အသိုက်အဝန်းကို ၎င်း၏ ညီအကိုတော်စပ်သူ အဲရန် (Aaron) ၏ သားများဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့၍ ဤယုံကြည်မှုမှ သွေဖည်သော အစ်ဇရာလိုက်များကို ချေမှုန်းသုတ်သင်ခဲ့သည်။ အနှစ်လေးဆယ်ကြာပြီးနောက်မှ မိုးဇက်သည် ကေးနန်နယ်မြေသို့ အစ်ဇရာလိုက်များကို အောင်မြင်စွာ ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေသည်။
မစ်ဒီယန်နိုက်များအပေါ် ဂစ်ဒီယန်၏ အောင်ပွဲ
ဂစ်ဒီယန် (Gideon) သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်၊ ယာယီ အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်၊ တမန်တော်တစ်ဦးဖြစ်၍ မစ်ဒီယန်နိုက်သားများအပေါ် အလွန်အရေးပါသော အောင်မြင်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တမန်ဆက်သားများကို လွှတ်၍ လူသူစုဆောင်းသည်။ မစ်ဒီယန်နှင့် အားမလိ (Amalek) ဒေသမှ စစ်တပ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပြီး ထိုတပ်ကြီးသည် ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးကာ ဂျက်ဇ်ရီးလ် (အစ္စရအေးလ်) တောင်ကြားရှိ ဟာဝတ် (Harod) ရေတွင်းတွင် စခန်းချနေကြသည်။ ဘုရားရှင်က ဂစ်ဒီယန်ကို ၎င်းစုဆောင်းထားသော လူသူများမှာ အလွန်တရာများလွန်းကြောင်းနှင့် ဤသို့လူများပြားသဖြင့် အစ်ဇရာလိုက်လူမျိုးများအဖို့ ဘုရားရှင်က ၎င်းတို့ကို ကယ်ဆယ်ဆောင်မသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုမည့်အစား ၎င်းတို့၏ အောင်မြင်မှုသာဖြစ်ကြောင်း ယူဆမည့်အကြောင်းအရင်းများရှိလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ပထမတွင် ဂစ်ဒီယန်သည် ကြောက်ရွံသောသူများကို အိမ်သို့ပြန်လွှတ်၍ ပြန်ချင်သူများ ပြန်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုသည်။ (၂,၂၀၀) သောလူအများ အိမ်ပြန်ကြကာ လူ (၁,၀၀၀) ကျန်ရစ်သည်။ ထိုပမာဏသည်လည်း များသေးကြောင်း ဘုရားရှင်က ဆိုသည်။ ထို့နောက် ဂစ်ဒီယန်က ထိုသူများကို ရေအနီးနား ခေါ်ဆောင်သွား၏။ အချို့မှာ လျှာဖြင့် ပလပ် ပလပ်မြည်အောင် သောက်ကျလေသည်။ ထိုသူများကို ဘေးတစ်ဖက်သို့ကပ် ခိုင်း၏။ အချို့ကား ဒူးထောက်လိုက်ပြီး လက်ကို ပါးစပ်အနီးတွင် ထား၍ သောက်ကြသည်။ ထိုသူများကို ဘေးတစ်ဖက်သို့ဖယ်ပြန်သည်။ ပလပ် ပလပ်မြည်အောင်သောက်သူမှာ အရေအတွက် သုံးရာဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဘုရားရှင်က ထိုလူသုံးရာနှင့်အတူ သူသည် ဂစ်ဒီယန်လက်ထဲသို့ မစ်ဒီယန်နိုက်လူမျိုးများအား ပေးသနားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုညအတွင်း ဘုရားရှင်ကပင် ဂစ်ဒီယန်ကို မစ်ဒီယန်နိုက်တို့စခန်းအား ချဉ်းကပ်ရန် ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို၌ မစ်ဒီယန်သားတစ်ဦးက မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို အိပ်မက်တစ်ခုအကြောင်း ပြောကြားနေသည်ကို ကြားမိလိုက်သည်။ ထိုအိပ်မက်မှာ မစ်ဒီယန်စခန်းသို့ မုယောစပါးဖြင့် လုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်တစ်လုံး လိမ့်ဝင်လာ၍ ၎င်းတို့၏ စခန်းပျက်စီးခြင်းရောက်သည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က မစ်ဒီယန်ကို ဂစ်ဒီယန်ဆီသို့ ပေးခဲ့ခြင်း အဓိပ္ပာယ်အဖြစ် အနက်ကောက်ခဲ့သည်။ ဂစ်ဒီယန် အစ်ဇရာလိုက်စခန်းသို့ ပြန်ရောက်၍ ၎င်းလူများကို ခရာ (shofar) တစ်ခုစီနှင့် မီးတုတ်တစ်ချောင်းဖွက်၍ထားသော မြေအိုးတစ်လုံးစီ ပေးခဲ့သည်။ အုပ်စုသုံးစုဖြင့် ဂစ်ဒီယန်တို့အဖွဲ့သည် ရန်သူ့စခန်းသို့ ချီတက်ကြ၍ ၎င်းလူများကို ခရာမှုတ်ရန်နှင့် မီးတုတ်ထွန်းညှိရန် ညွှန်ကြားလျှက် တိုက်ခိုက်ကြ၏။ ဤတွင် ရန်သူစစ်တပ် ထွက်ပြေးခဲ့ကာ ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းမိသည်။(တမ်းပလိတ်:Bibleref2).
ဆမ်ဆန်သည် ဘုရားကျောင်းကို ဖြိုလှဲဖျက်ဆီးပုံ
ဆမ်ဆန်သည် သမ္မာကျမ်းလာ ရှေးဟောင်း အစ်ဇရာလိုက်လူမျိုးတို့၏ စစ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်၍ 'အခွင့်အာဏာရှိသူများ' ကျမ်းစာအုပ် (Book of Judges) တွင် နောက်ဆုံးခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းဖော်ပြမှုများက ဆမ်ဆန်သည် နဲဇရိုက် (Nazirite - သေရည်ရှောင်ကျဉ်သူ၊ ဆံပင်အရှည်ထား၍ သေသောသူများကို မထိတွေ့တတ်သည့် ဘာသာရေးဆရာတစ်မျိုး) တစ်ဦးဖြစ်၍ ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင် စွမ်းအားအဖြစ် အလွန်ခွန်အားကြီးမားကာ သာမန်လူတို့ မလုပ်နိုင်သော အမှုများကို ထမ်းရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ၎င်း၏ဆံပင်ကို ဖြတ်လျှင် နဲဇရိုက်သစ္စာဆိုထားမှု ပျက်ယွင်း၍ စွမ်းအားများ ဆုံးရှုံးပေမည်။ ဖစ်လစ်စတိုင်း (Philistine)[မှတ်စု ၁]နွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လက်ထပ်ရန်တောင်းဆိုမှုအတွက် ထွက်ခွာသော ခရီးစဉ်တစ်ခုတွင် ခြင်္သေ့တစ်ကောင်က တိုက်ခိုက်သောအခါ ဖမ်းဆုပ်၍ တစ်စစီ ဆွဲခွာခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်၏ ဝိဉာဉ်တော်က ထိုစွမ်းအားများ ပေသနားထားသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဖစ်လစ်စတိုင်းများသည် ၎င်း၏ ဇနီးနှင့် ယောက္ခမကို မီးရှို့သတ်ခဲ့ပြီးနောက် ကလဲ့စားချေခြင်းအဖြစ် ဖစ်လစ်စတိုင်း များစွာကို သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဤသို့စကားကိုလည်း ဆိုလေသည်။ " သူတို့လုပ်တဲ့ အမှုအတိုင်း ငါပြန်လုပ်ပြီးပြီ။" ထို့နောက် အက်တန်ကျောက်ဂူတွင် ခိုကိုးခဲ့သည်။ ဖစ်လစ်စတိုင်းစစ်တပ်ကြီးသည် ဂျူးဒမျိုးနွယ်ဆီသို့ ရောက်လာခဲ့ကာ ဂျူးဒသား (၃,၀၀၀) က ဆမ်ဆန်ကို ၎င်းတို့ဆီ ပို့ဆောင်ပေးရမည်ဟု တောင်းဆိုသည်။ စစ်ဖြစ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ဆမ်ဆန်၏ သဘောတူညီမှုနှင့် အတူ ၎င်းကို ကြိုးနှစ်ချောင်းဖြင့် တုပ်နှောင်ကာ ဖစ်လစ်စတိုင်းတို့ထံ ပေးအပ်မည်ပြု၏။ ထိုပေးအပ်ခါနီးဆဲဆဲတွင် ဆမ်ဆန်သည် ကြိုးများဖြတ်၍ မြည်းတစ်ကောင်၏ မေးရိုးဖြင့် ဖစ်လစ်စတိုင်း (၁,၀၀၀) ကိုသုတ်သင်ခဲ့သည်။
ဆမ်ဆန်သည် ဆိုရက်တောင်ကြားနေသူ ဒစ်လိုင်းလ (Delilah) ကို နှစ်သက်ချစ်ကြိုက်သွားသည်။ ဖစ်လစ်စတိုင်းတို့က သူမထံချဉ်းကပ်၍ ငွေစ (၁,၁၀၀) ဖြင့် ဆမ်ဆန်၏ အားနည်းချက်ကို ရှာပေးရန် ဆွဲဆောင်တိုက်တွန်းသည်။ ထိုမှသာ ဆမ်ဆန်ကို အလွယ်ဖမ်းမိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆမ်ဆန်က ၎င်း၏ အားနည်းချက်ကို ဖော်ရန် ငြင်းဆန်ပြီး မှားယွင်းသည့် အဖြေများဖြင့် ကျီစားသည်။ ထို့နောက် ဆမ်ဆန်မှာ ခိုင်မာမှု လျော့နည်းလာပြီး ၎င်းသည် ဘုရားရှင်ကို အလုပ်ကြွေးပြုသည့် နဲဇရိုက်တစ်ဦးဖြစ်သဖြင့် ဘုရားက စွမ်းအားပေးထားကြောင်းနှင့် ဆံပင်ကို ဖြတ်ပါက ၎င်းသည် စွမ်းအားများ ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်ဟု လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြောကြားသည်။ ဒစ်လိုင်းလက ဆမ်ဆန်ကို ရင်ခွင်ထက်၌ အိပ်ပျော်စေကာ အိမ်စေတစ်ဦးကို ၎င်း၏ဆံပင်များ ဖြတ်ရန် ခိုင်းသည်။ ဆမ်မှာ စွမ်းအားမဲ့သဖြင့် ဖစ်လစ်စတိုင်းတို့က ဖမ်းဆီး၍ မျက်လုံးများဖောက်ထုတ်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၎င်းကို ဂါဇာဒေသသို့ ခေါ်ဆောင်ကာ ချုပ်ထား၍ ကြိတ်စက်နှင့် ပြောင်းဖူးခြွေစက်တွင် အလုပ်လုပ်စေသည်။
တစ်ရက်၌ ဖစ်လစ်စတိုင်းခေါင်းဆောင်များ ဘုရားကျောင်းတွင် ညီလာခံပြု၍ နတ်ဘုရား 'ဒေးဂေါ်န်' (Dagon) ကို ယစ်ပူဇော်ရန် အတွင်ဖြစ်၏။ ဆမ်ဆန်ကို နတ်ဘုရားက ၎င်းတို့ဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်လေသည်။  ဆမ်ဆန်ကို ဆင့်ခေါ်၍ လူအများအတွက် ဖြေဖျော်စေသည်။ ဘုရားကျောင်းမှာ လူများစွာဖြင့် ပြည့်နှက်နေကာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရဝင်အားလုံးနှင့် လူပေါင်း (၃,၀၀၀) ခန့်ဖြစ်သည်။ ဆမ်ဆန်ကို ဘုရားကျောင်းသို့ ခေါ်လာရင်း ဆမ်က ၎င်းကို ဖမ်းချုပ်လာသူများကို တိုင်ကိုမှီ၍ အနားပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ ဘုရားရှင်ထံသို့ ခွန်အားရရှိရန်တောင်းဆုပြုသော် ဘုရားက ထိုကျောင်းရှိ တိုင်များကို ဖြိုလှဲရန် ခွန်အားပေးသနားသည်။ သို့ဖြစ်၍ တိုင်များ ပြိုလဲပြီး အတွင်းရှိ ၎င်းအပါအဝင် အားလုံးသော သူများ သေကြေကြ၏။ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များက ဆန်ဆန်ကို ဂျူးတို့၏ ရိုးရာပုံပြင်တွင် လွမ်းခြုံနိုင်သော ဟက်ဟာကလီးစ် (ဟာကျူလီ) (သို့) အန်ကီဒူး တို့ကဲ့သို့ လူတစ်ပိုင်း နတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အနက်ယူကြသည်။ သို့မဟုတ် စံပြ ရိုးရာပုံပြင် သူရဲကောင်းအဖြစ်လည်း အနက်ထုတ်၍ ယူငင်ကြသည်။
ဆမ်မြူရယ်လ်ကျမ်းအရ အစ္စရေး၏ ပထမဆုံး ဘုရင် ဆောလ် နှင့် အစ်ဇရာလိုက်များသည် ဟာလေးတောင်ကြားဒေသတွင် ဖစ်လစ်စတိုင်းလူမျိုးများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ဖစ်လစ်စတိုင်းသူရဲကောင်း 'ဂလိုင်းယ' သည် စည်းနှစ်ခုကြားမှ ထွက်လာ၍ အစ်ဇရာလိုက်များ၏ သူရဲကောင်းကို ထုတ်၍ အရှုံးအနိုင်အဆုံးအဖြတ်အဖြစ် စီးချင်းထိုးရန် စိန်ခေါ်လေရာ ဆောလ်မှာ ကြောက်ရွံ့နေသည်။ ထိုစဉ် ဒေးဗစ်သည် ၎င်း၏ အကိုကြီးများအတွက် အစားအသောက်များ ယူဆောင်လာရင်း ဂလိုင်းယသည် ဘုရားရှင်၏ တပ်တော်ကို စိန်ခေါ်နေသည်ဟု ကြားလိုက်သည်။ တစ်ဆက်တည်း ဆောလ်ဘုရင်က ဂလိုင်းယကို ချေမှုန်းနိုင်သူကို ဆုလဒ်ပေးမည်။ ထို့ကြောင့် စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံခဲ့၏။ ဆောလ်မှာ စိတ်မပါစွာ သဘောတူခဲ့၍ ၎င်း၏ ချပ်ဝတ်ကို ပေးလေရာ ဒေးဗစ်က လက်မခံဘဲ ၎င်း၏ တုတ်၊ ကြိုးလောက်လွှဲ (sling : (ဟီဘရူး: קָלַע‎ qāla‘) ) လက်နက်နှင့် စမ်းချောင်းတစ်ခုမှ ကျောက်ခဲငါးလုံးကိုသာ ယူခဲ့သည်။
ဒေးဗစ်နှင်း ဂလိုင်းယတို့ ရင်ဆိုင်ကြရာ ဂလိုင်းယမှာ ချပ်ဝတ် ဝတ်ဆင်ပြီး လှံတံ ကိုင်စွဲကာ ဒေးဗစ်သည် တုတ်နှင့် ကြိုးလောက်လွှဲသာ ဆောင်ထားသည်။ ဒေးဗစ်သည် ကြိုးလောက်လွှဲမှ ကျောက်ခဲဖြင့်ပေါက်၍ ဂလိုင်းယ၏ နဖူးအလယ်တည့်တည့်ကို ထိမှန်လေရာ ဂလိုင်းယ မြေသို့ လဲကြသည်။ ဒေးဗစ်မှာ ၎င်း၏ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ခဲ့၏။ ဖစ်လစ်စတိုင်းတို့ ထွက်ပြေးကြ၍ အစ်ဇရာလိုက်တို့ ဂတ်သ် နှင့် အက်ခရောန် တံခါးဝများအထိ လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဒေးဗစ်သည် ဂလိုင်းယ၏ ချပ်ဝတ်ကို ဆောင်ယူကာ ၎င်းတဲအတွင်း၌ ထားလေသည်။ ထို့ပြင် ဂလိုင်းယ၏ခေါင်းကို ဂျေရုဆလင် မြို့သို့ ယူဆောင်ခဲ့ပြီး ဆောလ်ဘုရင်က 'အက်ဘ်နာ' ကို ထိုကောင်လေးအား ခေါ်လာရန် ခိုင်း၏။ တွေ့လျှင် ဆောလ်က မည်သူ့သားဖြစ်သနည်း ဟုမေးရာ ဒေးဗစ်က သူသည် အရှင့်ကျွန်တစ်ဦးဖြစ်သော ဘက်သ်တင်ဟမ်မြို့သား ဂျက်ဆီ၏ သားဖြစ်ကြောင်း လျှောက်၏။
Pieter Bruegel the Elder ရေးဆွဲသော ဘေးဘယ်လ် မျှော်စင် (၁၅၆၃)
ဘေးဘယ်လ် မျှော်စင် (သို့) တာဝါ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်သည် လူသားတို့၏ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေသော ဘာသာစကားများ၏ ဇာစ်မြစ်ကို ရှင်းပြထားသည်။ ဇာတ်လမ်းအရ ဂျက်နစ်စစ် (၁၁:၁–၉) တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားတိုင်းသည် ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းကိုသာ ပြောဆိုကြ၏။ အရှေ့အရပ်ဆီမှ လူသားတို့ ပြောင်းရွှေ့လာကာ ရှင်နာ နယ်မြေ (မက်ဆိုပိုတေးမီးယား) တွင် အခြေချကြသည်။ ထို၌ လူများသည် အုတ်ခဲနှင့် မိုးမျှော်စင် လုပ်ရန် ကြိုးစားကြ၏။ နာမည်ကြီးရန် ပြုမူကြ၏။ ကမ္ဘာကြီးတွင် ၎င်းတို့ တကွဲတပြား မဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က ဆင်းသက်လာ၍ ထိုမြို့နှင့် မျှော်စင်ကို ကြည့်ရှု၍ လူတစ်မျိုး ဘာသာစကားတစ်ခုဆိုလျှင် ၎င်းတို့ရှာဖွေရန်ပြုသော အရာရာသည် အကန့်အသတ်သဘောဖြင့် ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ ထို့နောက် ဘုရားရှင်က ၎င်းတို့၏ ပြောသောစကားများကို ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အကွဲကွဲဖြင့် တည်ရှိစေခဲ့သည်။ ယင်းနောက် မြို့တည်ဆောက်ခြင်းကို ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ကြတော့ချေ။ သို့ဖြစ်၍ ဤမြို့ကို ဘေးဘယ်လ် ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
'နိုးကြား စောင့်ကြည့်သူများ' (Watchers) ဇာတ်လမ်းပုံပြင် (ဂျက်နစ်စစ် ၆:၁–၄) သည် ရိုးရာဒဏ္ဍာရီမှ ဆင်းသက်လာနိုင်ချေရှိသည်။ ဤပုံပြင်အရ နတ်ဒေဝါတစ်ဦးသည် ကမ္ဘာလောကသို့ ဆင်းသက်လာ၍ လူသားများနှင့် လက်ထပ်ကာ 'နက်ဖစ်လင်' (nephilim) ဆိုသည့် ရှေးဟောင်း သူရဲကောင်း ကျော်ကြားသူများကို မွေးထုတ်ခဲ့သည်။ ဂျူးရိုးရာအယူအဆက ထိုနတ်ဒေဝါများကို မကောင်းသော နတ်ဆိုးများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဤဒဏ္ဍာရီသည် သူရဲကောင်းများကို မွေးထုတ်ရန် လူနှင့် နတ် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခြင်းအကြောင်း ရိုးရာဒဏ္ဍာရီ၏ အပိုင်းအစအဖြစ် ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြနိုင်သည်။
၇၅၀ CE ကဲလစ်ဖေးတ် ခေတ်ကာလအတွင်း ပိုင်နက်နယ်မြေ အမည်များ၊ ပါရှား၏ ခရိုင်နယ်မြေဖြစ်သော ခိုရာဆန်ကို အဝါရောင်ဖြင့် ပြသထား၏။
အာ. စီ ဇေးယဲ့နာ သည် အရှေ့ပိုင်းဘာသာတရားများ ဘာသာရပ်၏ ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဇိုရိုရက်စထရာဘာသာက ဂျူးတို့၏ (သေဆုံးခြင်း၊ နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်း) ဒဏ္ဍာရီအပေါ် တိုက်ရိုက် လွှမ်းမိုးမှု ရှိကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် သေသောသူ ရှင်သန်ထမြောက်၍ ဆုလဒ်၊ အပြစ် ရရှိမှု အပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်သည်ဟု ငြင်းခုံဆွေးနွေးဖော်ပြသည်။
↑ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ အမည်သည် ဤလူမျိုးများကို အစွဲပြု၍ ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
↑ Compare: Wertheim၊ David (2011)။ id=245pyunphikC Salvation Through Spinoza: A Study of Jewish Culture in Weimar Germany တန်ဖိုး |url= စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)။ Jewish and Christian Perspectives Series။ 21။ Brill။ p. 104။ ISBN 9789004207219။ These Hassidic stories became very popular, and did much for the discovery and reevaluation of Eastern Jewish culture. They becameakind of völkisch Jewish mythology, opposed to the nineteenth century rationalist interpretation of Judaism. Missing pipe in: |url= (အကူအညီ)
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Eliade, Myths, Dreams, and Mysteries, p. 141
↑ Armstrong၊ Karen (2005)။ "The Axial Age"။ A Short History of Myth။ Myths series။ Canongate။ p. 93။ ISBN 9781841956442။ 2018-03-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [...] the prophets of Israel [...] felt compelled to fight hard against old myths that they found incompatible with their Axial reform. [...] prophets such as Hosea, Jeremiah and Ezekiel undertookaradical revision of the old anthropomorphic myths. Because the old stories now seemed empty, they declared them to be false.
↑ ၅.၀ ၅.၁ Armstrong, p. 93
↑ Armstrong, pp. 95–96; Irwin, pp. 323–34
↑ Eliade, Myths, Dreams, and Mysteries, pp. 141–42; Irwin, p. 230, 233
↑ Irwin, p. 233; Armstrong, p. 82-83, 93–94
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ Armstrong, p. 96
↑ Seeley 1997, p. 236.
↑ Walsh 2001, p. 37 (fn.5).
↑ Labbu is discussed in terms of the developing "adversary" mythology of the Ancient Near East and the Judeo-Christian tradition, in Neil Forsyth, The Old Enemy: Satan & the Combat Myth (Princeton University press) 1987:44f.
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ McGinn, p. 24
↑ Garden of Eden, Encyclopædia Britannica
↑ This is compared with the Sorites paradox in Geocomputation, Stan Openshaw, Robert J. Abrahart, 2000, p. 167.
↑ Melton၊ J. Gordon; Baumann၊ Martin (2010)။ Religions of the World, Second Edition: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practises။
↑ Qur'an(S15) Al-Hijr:72–73
↑ Translation of the Hindu scripture Matsya 1:11–35 in Classical Hindu Mythology, p. 71-74
↑ "Thus says the LORD, "Let My people go, that they may serve Me."Exodus 8:1 Schmidt၊ Nathaniel (Feb 1896)၊ "Moses: His Age and His Work. II"၊ The Biblical World၊7(2): 105–19, esp. 108၊ It was the prophet's call. It wasareal ecstatic experience, like that of David under the baka-tree, Elijah on the mountain, Isaiah in the temple, Ezekiel on the Khebar, Jesus in the Jordan, Paul on the Damascus road. It was the perpetual mystery of the divine touching the human. .
↑ Oxford English Dictionary ၏ ဒုတိယမြောက် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်
↑ Porter၊ J. R. (2000)။ The Illustrated Guide to the Bible။ New York: Barnes & Noble Books။ p. 75။ ISBN 0-7607-2278-1။
↑ Judges 16:28–30, JPS (1917)
↑ Leviton၊ Richard (2014)။ The Mertowney Mountain Interviews။ iUniverse။ p. 244။ ISBN 9781491741290။
↑ Footnote on Genesis 6:1–4 in The New American Bible, St Joseph Edition.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျူးဒဏ္ဍာရီ&oldid=703547" မှ ရယူရန်
CS1 အမှားများ: missing pipe